Ye-Mon's Personal Pages: An Important Job
၃၊ ၆၊ ၂၀၀၇
မှတ်သားဖူးသော စာပိုဒ်လေးတစ်ခုကို ပြန်လည် ဖော်ပြလိုပါတယ်။ မူရင်း စာရေးဆရာကိုတော့ မသိပါ။ အမည်မသိ စာဆို လို့ပဲ ဆိုပါရစေတော့။
တရံရော အခါက သူငယ်ချင်း လေးဦးရှိလေသည်။ လူတိုင်း၊ တစ်ယောက်ယောက်၊ ဘယ်သူမဆို နှင့် ဘယ်သူမှ တို့ ဖြစ်၏။
တစ်နေ့မှာတော့ အလွန် အရေးကြီးတဲ့ ကိစ္စ တစ်ခု ဆောင်ရွက်ဖို့ရာ ရှိလာပါသတဲ့။ လူတိုင်း က တစ်ယောက်ယောက် တော့လုပ်မှာပဲလို့ အပိုင်တွက်ထားတယ်။ တကယ်ကတော့ ဘယ်သူမဆို လုပ်လို့ရတဲ့ ကိစ္စပါ။ ဒါပေမယ့်လည်း ဘယ်သူမှ မလုပ်ပါဘူး။ လူတိုင်း လုပ်ရမယ့်အလုပ်ကို မလုပ်တော့ တစ်ယောက်ယောက် က တော်တော် စိတ်ဆိုးသွားပါသတဲ့။ ဘယ်သူမဆို လုပ်လို့ရတယ်လို့ လူတိုင်း ထင်ပါတယ်။ သို့သော် လူတိုင်း လုပ်မှာ မဟုတ်ဘူး ဆိုတာကိုတော့ ဘယ်သူမှ သတိမထားမိပါ။ ဘယ်သူမဆို လုပ်နိုင်တဲ့ ကိစ္စကို ဘယ်သူမှ မလုပ်လို့ လူတိုင်း က တစ်ယောက်ယောက် ကိုအပြစ်ဖို့တာနဲ့ပဲ အဆုံးသတ်ရပါတော့တယ်။
ဘာသာပြန်ဆိုသူ၏ အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆိုချက် ။ ။ တစ်ဦးချင်း မိမိတာဝန် မိမိ မကျေပွန်ကြ၍ အလုံးစုံ ပျက်စီးခြင်းသို့ ဆိုက်ရောက်လေသတည်း။
ဒါနဲ့ ဆက်စပ်ပြီး နောက်ထပ် အဆိုအမိန့်လေး တစ်ခု မျှပါရစေ။
ခင်ဗျား မလုပ်ရင် ဘယ်သူ လုပ်မလဲ။
အခု မလုပ်ရင် ဘယ်တော့ လုပ်မှာလဲ။
Labels: burmese, english, general, quote
သေချာတာပေါ့ အစ်ကိုကြီးရာ.. ဒါကြောင့်လည်း ဘလော့ဂါလောက ကြီး တိုးတက်ဖို့ အလှူငွေ လာကောက်ရတာပေါ့.. ဘလော့ဂ်ကတဆင့် ကဏ္ဍ မျိုးစုံမှာ လုပ်စရာတွေ အများကြီး ရှိတယ်ဗျို့။
အို.. တို့ကိုကြီး ဆီဗောက်စ်က ၀င်ရေးလို့မရလို့ အီနော်ဒီကပဲဝင်ရေးသွားလိုက်ပါတယ်ဂျို့.. ခုလိုကူညီမယ်ကြောတော့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒါနဲ့စကားမစပ် ရန်ကုန်ဘယ်နားမှာသွားယူပေးရမလည်း ဟင်.. ။ :P
thanks for sharingavery good idea, rarey noticed.
Everybody was sure that somebody would donate $$ for blog book. Anybody can volunteer as an editor, too. But, nobody wants to make the first move. Everybody waits for somebody to both donate and volunteer.
Pain, tenderness, and empathy